UFuzile uzimisele ngokubuya nebhande lomhlaba
U-AZINGA Fuzile uzolwa impi yebhande le-IBF junior lightweight elingaphethwe muntu, eMadison Square, eNew York, ngempelasonto Isithombe: SITHUNYELWE
Zakhele Xaba | November 25, 2021
UNENGCINDEZI yokugqiba ihlazo leNingizimu Afrika umshayisibhakela wase-East London, u-Azinga "Golden Boy" Fuzile, ozolwela ibhande lomhlaba phesheya kwezilwandle ngoMgqibelo.
UFuzile (15-1-0) uzoxhimfana noKenichi Ogawa (25-1-1) waseJapan empini yebhande le-IBF junior lightweight elingaphethwe muntu, eMadison Square, eNew York. Ibhande le-IBF junior lightweight lisale liyintandane ngoFebhuwari emuva kokuthi umpetha walo, uJoseph "Jojo" Diaz, wase-America, elishiye esikalini ngaphambi kwempi yokulivikela noShavkatzdhon Rakhimov waseTajikistan.
Inhlangano i-IBF inqume ukuthi libangwe ngu-Ogawa noRakhimov owehlelwe yishwa lokulimala esalungiselela impi. Emuva kokungalulami ngokushesha kukaRakhimov, le nhlangano igunyaze ukuthi isikhala sakhe sivalwe nguFuzile.
Ingcingezi ekuFuzile eyokuwinela iNingizimu Afrika ibhande lomhlaba. UMzansi usale ungenaye umpetha womhlaba emuva kokuhlulwa kukaMoruti Mthalane ephucwa ibhande le-IBF flyweight nguSunny Edwards ngo-Ephreli.
UFuzile waseDuncan Village uthe akangabazi ukuthi uzobuya nalo ibhande lomhlaba.
"Ngijabule kakhulu ukuthola leli thuba lokulwa no-Ogawa empini yebhande lomhlaba. Ngizoyiwina le mpi. Ngisho ngabe besilwela eJapan, akusho lutho. Umphumela kade uzofana. Ngimbukile u-Ogawa kwazise ngo-2019 kwakufanele ngilwe naye empini yokuhlunga kodwa wathatha enye impi. Angazi noma wangesaba noma kwaba yini. Kodwa leyo mpi yagcina ingenzekanga," kusho uFuzile kwi-matchroom boxing.
"U-Ogawa ungumshayisibhakeka okunzima ukulwa naye kodwa ngeke ngigxile kuyena. Unamandla futhi ulwa ngokuza phambili nokufaka ingcindezi. Kodwa ulwe nabantu abebekade bemhlonipha. Mina anginandaba naye futhi angimhloniphi. Yena uzongihlonipha. Ngeke ngisho ukuthi impi ngizoyiwina kanjani, kuzoba wumngqimuzo womlalisa phansi noma kuzoba kanjani. Kuzoncika kuyena u-Ogawa ukuthi uzimela kanjani izibhakela zami."
UFuzile ungomunye wabashayisibhakela abasebancane okubhekwe lukhulu kubona. Uqale isibhakela esikhokhelayo ngo-2014. Uwine ibhande leSA featherweight empini yesihlanu ehlula umakadebona, uMcbute Sinyabi. Uqhubeke wawina eleWBC Youth nele-IBF Continental Africa.